Garmaajo oo xaflad iskugu yeerey Taageerayaashiisa si uu u mac salaameeyo !!! – MANABOLYO NEWS
Garmaajo oo xaflad iskugu yeerey Taageerayaashiisa si uu u mac salaameeyo !!!
Madaxweynaha Soomaaliya ee waqtigiisa dhammaaday Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa ku dhawaaqay in 4-ta bisha Maarso oo ku beegan khamiista soo socota inuu martigelinayo munaasabad lagu dhammeystirayo dadaalkii iyo wada hadalladii laxiriiray hirgelinta doorashooyinka dalka ee udhexeeyey Dowladda Federaalka Soomaaliya, Dowlad Goboleedyada iyo Maamulka Gobolka Banaadir.
Kulankan oo hal maalin soconaya wuxuu ku qabsoomayaa magaalada Muqdisho, waxaana looga gol leeyahay in lagu soo gabagabeeyo talooyinkii Guddiga Farsamada Doorashada ee ka soobaxay shirkii Baydhabo 15-16 Febaraayo 2021, kaas oo xal looga gaaray tabashooyinkii ka soo laabtay heshiiskii doorashooyinka ee 17kii Sebteembar 2020.
“Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay ahmiyad wayn siinaysaa hirgelinta doorasho hufan oo jawi nabdoon ku qabsoonta”ayaa lagu yiri War saxaafadeed goordhow ka soo baxay Villa Somalia.
Shirkan uu iclaamiyay Madaxweyne Farmaajo ayaa ku soo aaday, iyadoo is faham laga gaaray shirkii u dhaxeeyay Ra’iisul Wasaaraha iyo Midowga Musharaxiinta, kuwaasoo shirkooda caawa ka soo baxay dhismaha Guddi isku dhaf ah oo loo saaray qaban qaabada bannaan baxa nabadeed iyo baaritaanka madaxa bannaan ee dhacdadii 19 February.
Madaxweyne Deni & Madobe : Waxaan diidaneeyn siyaasada Madaxweynihii hore Farmaajo
Toogasho ka dhacdey Magaalada Nairobi
Gudoomiyaha Mucaaradka SH Sharif : Mucaaradka dulqaadkii wuu ka dhamaadey
Somalia’s Farmajo must break election deadlock, says US